Clicky mandefa Google Gadget | Martech Zone
Zoma, Oktobra 5, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Raha efa namaky ny bilaogiko nandritra ny fotoana kelikely ianao dia fantatrao fa izaho dia mpankafy lehibe ny Clicky Web Analytics. Fandaharana an-tranonkala Web Analytics mahafinaritra fotsiny, maivana, tsy misy dikany izay tsara amin'ny fanaovana bilaogy. Tiako be izany ka nanoratra ny plugin WordPress ho azy aza aho!
Tonga izao ny iGoogle Clicky Dashboard nataon'i Scott Falkingham avy amin'i Hevitra mahaliana:
Raiso ny fampiasa rehetra an'ny Clicky ary apetraho anaty Gadget mahafinaritra! Oay! Tsy mila mampiasa ny Google Gadget amin'ny pejinao iGoogle ianao. Google Gadgets dia azo apetraka na aiza na aiza miaraka amin'ny tag script kely milamina. Tiako be ilay Gadget ka nohavaoziko ny plugin WordPress ary nalefako tany amin'i Sean! Antenaina fa havoakany ny plugin Admin vaovao miaraka amin'ny Gadget natsofoka!
Raha te hahazo ilay Gadget dia mandehana misoratra anarana Clicky. Azonao atao ny misintona ny Gadget ao amin'ny Google sy ny plugin WordPress ao amin'ny pejy Goodies.
Tags: David Siteman GarlandLafo malaky haingana kokoaNy fiakarana ho any ambonyMarketing amin'ny Twitter
PHP sy MySQL: Alefaso Query amin'ny fisie Delimited File
5 Okt 2007 amin'ny 11:44 PM
6 Oktobra 2007 à 6:12
8 Okt 2007 amin'ny 9:53 PM